Deals at ICT.com.mm, the #1 Online Tech Retailer in Myanmar – Tagged "Earphones"
Jabra Sport Pace Wireless Earphone (Yellow)K156,400 K149,000-5%
Jabra Sport Pace Wireless Earphone (Black)K156,400 K149,000-5%
Jabra Sport Pace Wireless Earphone (Blue)K156,400 K149,000-5%
Jabra Sport Pace Wireless Earphone (Red)K156,400 K149,000-5%
Rapoo i100 TWS Wireless Bluetooth 5.0 EarphonesK40,900 K37,000-10%
Aukey EP-B40s Latitude Wireless Earbuds (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Comfortable and secure noise-isolating in-ear headphones with aptX technology, delivering rich and robust wireless audio Earbuds conveniently clip together magnetically around your neck Bluetooth 4.1 connects quickly...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: Aukey EP-T25 Technology: BT 5, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC Driver (each channel): 1 x 6mm / 0.24” speaker driver Sensitivity: 90 ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)...
Hoco E37 Gratified Business Wireless Headset (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless specification: Wireless V4.1 WT. Support protocols: Headset Hands-free A2DP Avrcp, thus earphone stream clear and continuous music and promise more stable signal, as well balanced sound,...
Hoco E37 Gratified Business Wireless Headset (White)
Hoco ES51 Era Sports Wireless Earphones (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: ABS Earphones cable length 90cm Weight: 21g BT version: 5.0, chip: JL Battery capacity: 130mAh Charging time: about2hours Calls / music time: 10 hours...
Hoco ES53 Coolway Sports BT Earphone (Red)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: ABS + silicone BT V5.0, chip: JL Battery capacity: 100mAh Charging time about 1.5 hours Calls / music time: 8 hours Standby time: 200 hours Hanging...
Hoco L8 Type-C Earphones With Microphone (White)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Earphones Wireless V4.2 technology ensures this headset an easy and quick pairing. Support agreement A2DP, AVRCP, HSP, HFP, therefore headset compatible with any smartphone or Wireless enabled...
Hoco M28 Ariose Universal Earphones with Mic (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Speaker: 10mm Impedance: 16Ω ± 15% Frequency response: 20 ~ 20000Hz Sensitivity: 92db ± 3db Audio plug: Ø3.5mm Weight: 15g Earphone cable: TPE high elastic with enameled...
Hoco M28 Ariose Universal Earphones with Mic (Metal Gray)-29
Hoco M28 Ariose Universal Earphones with Mic (White)-29
Hoco M63 Ancient Sound earphones with Mic (Silver)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Speaker: 10mm, 16Ω ± 15% Audio plug: Ø3.5mm Earphones cable: TPE high elastic braid, enameled wire Cable length: 1.2m Weight: 13g EAN Code: 6931474709226 Microphone: controller with...
Hoco M63 Ancient Sound earphones with Mic (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Speaker: 10mm, 16Ω ± 15% Audio plug: Ø3.5mm Earphones cable: TPE high elastic braid, enameled wire Cable length: 1.2m Weight: 13g EAN Code: 6931474709219 Microphone: controller with mic...